१४ वर्षीय गणितका प्राध्यापक
१३ पुष २०७६, आईतवार काठमान्डौ , तपाईं कति वर्षको हुनुभयो ? आजसम्म तपाईंले जीवनमा कति उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ? अझ भनौँ कति पढ्नुभएको छ ? दुनियाँमा थोरैमात्र प्रतिभाशाली र भाग्यशाली हुन्छन्, तिनले मात्रै पाउँछन् अवसर पनि ।बेलायतको लेस्टर विश्वविद्यालयमा एक जना बालकले १४ वर्षको उमेरमै प्राध्यापक हुन सफल भएका छन् । इरानी मूलका १४ वर्षीय मुस्लिम किशोर युनिभर्सिटीमा गणितको प्राध्यापक बनेर पढाइरहेका हुन् । उनको नाम याशा एस्ले हो, उनी उक्त विश्वविद्यालयमा अतिथि शिक्षकको रुपमा छानिएका हुन् ।
त्यहाँ उनले विद्यार्थीलाई पढाएर आफू पनि डिग्री गरिरहेका छन् ।उक्त बालकको यस्तो प्रतिभा देखेर सबैले उनलाई सानो उमेरका प्रोफेसर भन्ने गरेका छन् । याशाको पिता मुसा एस्ले आफ्नो छोराको यस्तो प्रतिभा देखेर अचम्म छन् । उनले नै विश्वविद्यालयसम्म छोरालाई छोडिदिने गरेका छन् । याशाको गणितमा विशेष रुचि रहेको छ । गणितमा अविश्वसनीय ज्ञान देखेर उसका अभिभावकले उसलाई मानव क्याल्कुलेटरको उपनाम नै दिएका छन् ।अब उनले चाँडै आफ्नो डिग्री सकेर पीएचडी सुरु गर्ने बताइएको छ। याशाले १३ वर्षको हुँदै युनिभर्सिटीमा सम्पर्क गरेका थिए ।त्यसपछि युनिभर्सिटीले सानो उमेरको भएकाले सोधपुछ गरेको थियो तर उनको जवाफ देखेर सबै अचम्म भए ।
त्यसपछि युनिभर्सिटीले याशालाई अतिथि शिक्षक बनाएको हो ।उनलाई अतिथि शिक्षक पद दिँदा मानव संसाधन विकास विभागबाट विशेष अनुमति लिनुपरेको थियो । युनिभर्सिटीले यो प्रस्ताव परिषद्सामु राख्दा १४ वर्षको यो बच्चासँग यति धेरै ज्ञान रहेको भन्नेमा संशय्य भएको थियो तर उनले आफ्नो प्रतिभा प्रमाणित गर्दै पढाइदिए । यसबाट उनीहरु अचम्म र आश्चर्यचकित भएको बताइएको छ ।याशाले यो वर्ष आफ्ना लागि सुखद रहेको बताए । उनले आफूले जागिर पाउनु भन्दा पनि अरुलाई पढाउन पाउनु आफ्ना लागि ठूलो कुरा भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
खोप उपलब्ध गराएर मात्र परीक्षा सञ्चालनको माग गर्दै विद्यार्थी द्वारा ‘प्रदर्शन’
अलमण्ड खानुको फाइदा यस्तो के के हुने रैछ हेर्नुहोस।